Ihe nketa ọdịbendị bara ọgaranya nke Maldives na -eti ụdị InternationalYacht Rally Style
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ihe nketa ọdịbendị bara ọgaranya nke Maldives na -eti ụdị InternationalYacht Rally Style
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ Maldives na -agbasa • nzukọ • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ Sao Tome na Principe • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • WTN
Onye isi nchịkwa nke MITDC, Mohamed Raaidh
'Savaadheeththa Dhathuru' bụ mmemme ụgbọ mmiri nke Maldives Integrated Tourism Corporation (MITDC) haziri na -akpọ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri si n'akụkụ ụwa niile ka ha sonye na njem gafee oke osimiri Maldives, na -akwụsị n'agwaetiti mpaghara, na -enyocha ihe nketa, na -ahụ ebe mgbaba ama ama, Njem mmiri wdg. Njem ahụ ga -amalite na Febụwarị 2022 na -amalite site na mgbago mgbago mgbago ugwu nke mba ahụ, Haa Alif Atoll, na -ewere usoro izu atọ iji rute Baa Atoll. Emebere ya ka ọ gaa leta agwaetiti iri na otu mmadụ bi.
Ebumnuche nke ndị na -ahazi International Yacht Rally bụ ịkwalite ọdịbendị na ihe nketa nke Maldives, akụkọ ihe mere eme ya nke ọma yana njem njem ụgbọ mmiri yana irite uru nke iwusi mpaghara ndị a ike n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke mba ahụ.
MITDC na-eme ka ihe omume a pụta ìhè dị ka ụtụ nye otu n'ime ndị eze kachasị ukwuu ga-achị mba nta agwaetiti ahụ, As-Sultan al-Gaazee Muhammad Thakurufaanu al-Auzam (Bodu Thakurufaanu).
Nke a ga -abụ njem pụrụ iche site n'akụkọ ihe mere eme nke Maldivian, na -akọwapụta ihe ncheta maka Sultan Muhammed Thakurufaanu, na ịga na saịtị akụkọ ihe mere eme metụtara mbọ ya.
Ememe mmalite maka Savaadheeththa Rhathuru International Yacht Rally Emere 2022 taa na Mọnde, 23 nke Ọgọst 2021 na National Museum.
Okwu mmeghe nke onye isi nchịkwa Mohamed Raaidh mere ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị iweta mgbanwe na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Maldives ma kwurịta mkpa ọ dị ịkwalite njem nlegharị anya obodo na agwaetiti.
O hotakwara okwu Onye isi ala Ibrahim Mohamed Solih na ncheta afọ 100 nke Muleeaage na Disemba 2019, nke kpọrọ oku ka ewebata njem nlegharị anya na mkpa ya na Maldives.
Peeji a ama ama 2 of 2 okwu bụ mkpali nke duziri ya MITDC otu iji hazie nnọkọ ụgbọ mmiri Savaadheeththa Dhathuru.
Onye ọbịa nke nsọpụrụ, Savaadheeththa Dhathuru Yacht Rally bụ onye ọbịa nsọpụrụ, Maazị Salah Shihab, onye isi njikwa na onye guzobere Voyages Maldives na Seagull Group.
N'okwu ya, Maazị Salah lebara anya ya iji kwuo maka mkpa njem nlegharị anya safari nke agwaetiti dị ka Maldives ma kwuo na nke a bụ ụzọ kacha mma inyocha ezigbo Maldives.
Ọ gara n'ihu kwupụta ekele ya maka ịhazi International Yacht Rally, ebe ọ kwenyere na nnọkọ dị otu a ga -adọta ọtụtụ mkpughe na mpaghara omenala na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke mba ahụ.
Ihe omume ahụ nwekwara okwu sitere na Musheer nke Ministry of Heritage, Nishaan Izzudheen ge Izzathuge Veriya Maazị Abbas Ibrahim onye kwuru okwu nnabata banyere mkpa ọ dị ịchekwa ihe nketa mba ahụ, ma gosipụta ekele ya nye onye ọ bụla tinyere aka n'ịhazi ụdị mmemme a. .
Onye isi nchịkwa MMPRC, Maazị Thoyyib Mohamed wepụtara abụ isiokwu nke nnọkọ ahụ na mmemme a. N'okwu ya, o mesiri MITDC obi ike na MMPRC ga -eme ngagharị iwe a, na -akọwapụta mkpa ọ dị ịmalite ụdị ihe omume a.
Ememe ahụ bụ onye Minista akụ na ụba Uz. Fayyaz Ismail, onye ozi nchekwa Uz. Mariya Didi, ndị otu ụlọ omebe iwu, ndị ọrụ gọọmentị na ndị isi dị iche iche nke ụfọdụ ọgbakọ kacha elu na mba ahụ.
Site na mwepụta nke ndị ọrụ, isonye na ụgbọ mmiri Savaadheeththa Dhathuru ugbu a emeperela maka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri si n'akụkụ ụwa niile isonye na nnọkọ ụgbọ mmiri mbụ na agwaetiti Maldives. Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke nnọkọ ụgbọ mmiri bụ www.maldivesyachtrally.com
Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC) bụ 100% Gọọmentị Maldivian SOE nke enyere nkwado na ịkwalite mmepe na uto nke akụkụ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya. Ebumnuche ya bụ isi bụ iweta mba ahụ akụ na ụba site na ịgbasa ụzọ ga -ekwe omume nke mpaghara njem nlegharị anya site na nhazi usoro na atụmatụ nke ime njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ a. MTDC bụ onye otu Network Njem Nleta Ụwa.